James Swan: Su’aal ayaa ka taagan Sharci Ahaansha Villa Soomaaliya Uu Ku Joogo Madaxweeynaha | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA James Swan: Su’aal ayaa ka taagan Sharci Ahaansha Villa Soomaaliya Uu Ku...
James Swan Wakiilka Ergayga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya , ayaa khudbad dhinacya badan taabaneyso uu kaga hadlay arrimaha Soomaaliya waxa uu ka jeeydiyay shirka Golaha Ammaanka QM oo xalay ka qabsoomay Aalladda fogaan aragge ee Zoom-ka .
Shirkan oo ay ka soo qeeyb galeen xubnaha Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay waxa looga hadlay xaaladda Soomaaliya, Arrimaha Bini aadanimada , Doorashooyinka iyo Ammaanka.
Swan ayaa sheegay Soomaaliya in ay wajaheyso xaalad cakiran oo dhanka Ammaanka ah , isagoo sheegay in ay ka walaacsan yihiin shaqaaqadii magaalada Muqdisho ka dhacday jicmihii .
“Xiisadaha ka dhasha hirgelinta doorashada ayaa hada waxaa ku soo kordhay su’aalo ay soo bandhigeen qaar ka mid ah dadka siyaasada ku xeel dheer ee ku saabsan sharci ahaanshaha xilka madaxweynaha ka dib markii uu dhamaaday muddadiisii dastuuriga ahayd 8 Febraayo. Xukuumaddu waxay soo xigatay qaraarkii baarlamaanka ee bishii Oktoobar u oggolaanayay Madaxweynaha inuu sii joogo, laakiin tan waxaa ku tartamaya kuwa kale.”
“Dhanka kale, subaxnimadii 19-ka Febraayo, maalin mudaaharaad ah oo ay ku dhawaaqeen Golaha mucaaradka ee Murashaxiinta Madaxweynaha, dhowr dhacdo oo rabshado wata ayaa la soo sheegay. In kasta oo faahfaahin buuxda aan la xaqiijin, dhacdooyinkaas waxaa la soo weriyey inay ka mid ahaayeen is-weydaarsiga hubaysan ee u dhexeeya shaqaalaha amniga ee dawladda iyo kooxaha amniga ee ay shaqaaleeyaan mucaaradka, iyo sidoo kale ka-noqoshada si ay u noolaadaan rasaas ay ridayaan ciidamada dawladda si ay u kala eryaan dibad-baxayaasha.”
“Xiriirka dadweynaha ee ka imanaya hoggaamiyeyaasha muhiimka ah wuxuu noqday mid sii kordhaya oo muran iyo iska hor imaad ah, taasoo muujineysa jahwareerka, kalsooni darrada, iyo dareenka cabashada ee ay dareemeen dad badan.”
James Swan oo sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda amaan ee dalka iyo weerarada Al-shabaab ay ka geeysanayaan dalka ayaa waxa uu sheegay in ay tahay wax aad looga xumaado in weli ay sii jirto qatarta kooxdan.
“Al-Shabaab waxay wali wadaa qatarta koowaad ee amniga dalka. Al-Shabaab waxay kordhisay howlaheeda howleed tan iyo bishii Ogosto 2020, bilawgii 2021-na waxaa u muuqday heer cusub oo ku aadan tirada weerarada, oo ay ku jiraan inbadan oo ah Ismiidaamin qofeed iyo Gawaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiya, ee lagu bartilmaameedsanayay saraakiisha dowladda iyo shaqsiyaadka muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed.”
Swan ayaa sidoo kale xusay in Soomaaliya ay sanadkaan ay wajaheyso xaalad bini aadanimo ah , iyadoo qeyb ka mid dalka ay soo foodsaartay cuna yari baahsan.
“Xaaladda bani’aadamnimada ee Soomaaliya ayaa weli ah mid aad u xun. Tirada dadka u baahan caawimaadda ayaa ka kici doonta 5.2 milyan oo qof sanadkii la soo dhaafay waxaana lagu qiyaasayaa 5.9 milyan oo qof sanadka 2021. Tani waa natiijada ka dhalatay kororka cunno yarida, aafooyinka cimilada, ayaxa ugu xun ee Ayaxa ku habsaday tobanaan sano, iyo saameynta Cudurka caalamiga ah covid19. Nasiib darrose, toddobaadyadii la soo dhaafay waxaan aragnay koror ku soo kordhay kiisaska COVID ee Soomaaliya, taas oo kaliya ka sii dari doonta xaaladda bani’aadamnimada ee markii horaba adkayd. Soomaaliya waxay xaq u leedahay barnaamijka tallaalka COVAX, Qaramada Midoobayna, iyadoo si dhow ula kaashaneysa mas’uuliyiinta Soomaalida, waxay hubin doontaa in qaybtii ugu horreysay ee tallaallada si wax ku ool ah loogu qaybiyo shaqaalaha safka hore iyo kooxaha nugul ee dalka oo dhan. In kasta oo aan si qoto dheer uga mahadcelineyno deeq-bixiyeyaasha deeqsinimada leh ee 2020, baahida bani’aadamnimada ayaa sii socon doonta iyadoo aan mar kale ka codsaneyno taageerayaasha deeq-bixiyeyaasha Qorshaha Jawaab-celinta Bina-aadamnimada ee 2021, oo $ 1.09 bilyan loo codsaday.”
Sikastaba walaaca QM ee Bini aadanimada , Ammaanka iyo Xaaladda kala guur ee dalka ayaa ku soo adaya xilli muran uu ka taagan yahay sharciyadda aqalka looga arimiyo dalka uu ku joogo madaxweeynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullahi Farmaajo .
Previous articleWAARE oo fasiraad ka bixiyey kulankii golaha ammaanka ee xaaladda Soomaaliya
Next articleMareynkanka oo amar culus dul dhigay Hoggaanka Soomaalida
Daawo: Masuul ka tirsan Xisbiga Wadani ee Somaliland oo midnimo ugu yeeray Somaliweyn
FARMAAJO oo laga diiday inuu ciidamada Danab kusoo daabulo Muqdisho
Maxay Dowlada Somalia Uga Furi Waayday Baaritaan Madax bannaan Dhacdada Badda?
3 waxyaabood oo sabab u ah amni darrada Muqdisho
Ingiriiska oo si rasmi ah uga baxay Midowga Yurub iyo Soomaali badan oo cabsi ka qabo…
Xog ku saabsan khilaafka sii xoogeystay ee MD Farmaajo & A.Madoobe?..
Soomaali kale oo ka mid noqotay dadkii ku dhintay shilkii Ethiopan Airlines(Sawirro)
Ciidamada Dowladda & Al-Shabaab oo Dhaqdhaqaaq Ciidan kawada Gobolka Mudug.
Dowlada oo dabo gal ku bilowday sida ay u socoto Shaqada Dekada Muqdisho (Daawo Sawiro)
Abaabul xoogan oo kasocda magaalada Muqdisho oo kusaabsan arin kufarxi doonin MD Farmaajo
Waa maxay wadaniyad?
Sarkaal ‘Al-Shabaab ah oo hab farsamo ah ku galay’ Mareykanka oo loo soo masaafuriyey Soomaaliya
War Naxdin leh oo caawa naga soo gaaray magaalada Baladweyne xili dhimasho cusub…